Warshad tayo sare leh SMD-80B Mashiinka Bowl Bowl iyo soosaarayaasha | Mashiinka Chengda
SMD-80B Mashiinka Bowl Warqadda
SMD-80B waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo weel xajmi weyn oo baaldi ah iyo baaldi loogu talagalay maraq, salool iyo cunto la shiilay.
Naqshadeynta gawaarida dhididka nooca loo yaqaan '1.Linditudinal axis gear drive'. Naqshadeyntaani waxay xoojineysaa qaabeynta mashiinka gudaha, waxay hubineysaa saxnaanta mashiinka wadista, waxqabadka isku midka ah oo sarreeya, sidaa darteed waxay ka dhigi kartaa qayb kasta oo ka mid ah isuduwidda mashiinka, si looga hortago isku dhaca mashiinka .
Qalabka kululeynta ee Switzerland waxay u qalabeysan tahay koobka jirka iyo xiritaanka hoose, salka waa la kululeeyaa marka hore ka hor inta aysan quudin, sidaas awgeed waxay hagaajineysaa saameynta kuleylka iyo caawinta dammaanad qaadista.
3.Mashiinka oo dhan waa naqshad qaabdhismeedka nooca sanduuqa, saliid buuxinta nidaamka saliidda lagu buufiyo, taas oo yareyn karta dhaawaca, qaboojinta waxtarka leh. Sidaas darteed mashiinku si dhakhso leh ayuu u socon karaa.
4.Marka ugu horeeya ee curlingku wuxuu adeegsadaa isbadalka wareega ee gudaha ku sii fidaya, isagoo doorbidaya hagaajinta xaashida sameynta xoojinta. Amarka daweynta labaad wuxuu adeegsadaa dejinta kuleylka, afka maroojinta kaliya uma muuqato mid aad u fiican laakiin sidoo kale waxay ilaalinaysaa xasiloonida cabbirka.
Xawaare 70-80 kumbiyuutarro / daqiiqo
Cabirka koobka Ballaca Sare: 150mm (max)
Ballaca hoose: 120mm (max)
Dhererka: 120mm (max)
Soo saar 380V / 220V, 60HZ / 50HZ, 14KW
Isticmaal laba-laab, laba-laab amar si aad u sameysato koob warqad .Mashiinka SMD-80B waa badeecad casriyeyn ah oo salka ku heysa mashiinka koobabka warqadda hal-wareega ah. Mashiinka wuxuu qaataa nooca furan, naqshadeynta kala goynta, gawaarida gawaarida, naqshadeynta dhidibka dhererka. Marka si macquul ah ayey u qaybin karaan qayb kasta oo ka mid ah waxqabadka
Mashiinka oo dhami wuxuu qaataa saliida lagu buufiyo buufiska, sidaa awgeed wuxuu yareeyaa qaybaha kalagoynta, wuxuuna qaadanayaa Switzerland kululeeyaha kululeeyaha koobka jirka iyo xiritaanka warqadda hoose; iyo qulqulka saliida silicon ee ay maamusho PLC & waalka elektromagnetic, wadar ahaan laba koorso oo loogu talagalay sameynta curling sare, koorsada koowaad wareega wareega ugu sareeya, iyo tan labaad ee kuleylka iyo sameynta, sidaas darteed koobku wuxuu noqon doonaa mid aad u fiican
Nidaamka PLC wuxuu xukumaa geedi socodka sameynta koobka oo dhan. Adoo adeegsanaya nidaamka baarista cillad-farsameedka korantada iyo quudinta gacanta adeegga, mashiinkeenna koobka warqaddaha wax-qabadkiisa lagu kalsoonaan karo ayaa la damaanad qaadayaa, isagoo markaa siinaya hawlgal deg deg ah oo deggan. Mashiinka ayaa si otomaatig ah u joojin kara shaqada marka uu cillad jiro. Sidaas awgeed waxay si weyn u wanaajin kartaa heerka badbaadada hawlgalka waxayna yareyn kartaa xoogga shaqaalaha.
SMD-80B mashiinka koobka warqadaha caqliga badan wuxuu fududeeyaa habka warqad sameynta koobka, mashiinkaan wuxuu dhameyn karaa quudinta warqada, xoqida, quudinta koobka-hoose, kululaynta, isqurxinta, koobabka afka, koob aruurinta, iwm. Hal meel. sameynta fijaannada xaashi ee dhererkoodu yahay 60-120mm.
Hore: Mashiinka Daboolka Waraaqaha ee PLM-80
Xiga: SMD-80A Mashiinka Mashiinka Labaad ee Wareegga ah